बिवाहित पुरुषहरुले जान्नैपर्ने यी ७ कुरा !
Home / रोचक / बिवाहित पुरुषहरुले जान्नैपर्ने यी ७ कुरा !
बिवाहित पुरुषहरुले जान्नैपर्ने यी ७ कुरा ! 0
यो एउटा वैज्ञानिक सत्य पनि हो कि, शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रुपमा महिला र पुरुष दुवै एक अर्को बिना अधुरो हुन्छन। दुवैको मिलानमा नै अधुरोपन हट्छ। दाम्पत्य जीवन सुखी र खुसि साथ बिताउन श्रीमान श्रीमतीले यी कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
१, संयम भनेको समय-समयमा हुने मानसिक उत्तेजना जस्तै कि कामवासना, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मोह आदिमा नियंत्रण गर्नु । श्रीमान-श्रीमतीले आफ्नो संपूर्ण दाम्पत्य जीवन अधिक संयम र प्रेमले जिउनु पर्छ । श्रीमान-श्रीमतीले कहिले पनि मानसिक या शारीरिक रूपमा अनियंत्रित हुनुहुन्न ।
२, संतुष्टि भनेको एकअर्कोसँग साथ हुदा सुख-सुविधा प्राप्त हुन्छ त्यसैमा चित्त बुझाउनु हो । त्यसैले मनमा सन्तोक हुनुपर्छ ।
३, दाम्पत्य जीवनमा सन्तानको स्थान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रीमान-श्रीमती बीचको सम्बन्ध मधुर र मजबूत बनाउन सन्तानको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।
४, श्रीमान-श्रीमतीले एक अर्काको भवन विचारलाई कदर गर्नु पर्छ ।
५, श्रीमान-श्रीमतीले आफ्नो सम्बन्ध इमान्दारीको साथ निभाउने संकल्प गर्नु पर्छ ।
६, श्रीमान-श्रीमतीबीच शारीरिक, आर्थिक र मानसिक मजबूती हुनुपर्छ ।
७, श्रीमान-श्रीमतीको वैवाहिक जीवनमा एक अर्कासँग पूरा समर्पण र त्याग हुन आवश्यक हुन्छ ।
यि तीन कुरा भएका पुरुष हुन्छन् अभागी, सक्दैनन कहिल्यै खुशी हुन !